Ghana anaa Gaana yɛ kuro bi a ɛwɔ Africa atɔeɛ mantam hɔ. Nkuro a atwa ne ho ahyia no bi ne Côte d’Ivoire (ɛno wɔ atɔe fam), Burkina Faso (ɛno wɔ atifi fam), Togo (ɛno wɔ apue fam) ɛna Gulf of Guinea no wɔ anafo fam. Edin Ghana no kyerɛ “Ɔko mu Hene” na wonyaa saa din no fii tete Ghana empire no mu.
Kane no, na ahenfo ahodoɔ na woagye Ghana asase no afa paa yie, te sɛ Asanti Ahenni, Akwamufo, Bonomanfo, Denkyirafoɔ, Fantefoɔ, ne afoforo a wɔka ho. Ebinom de, na wɔnyɛ Akanfoɔ, te sɛ Nkranfoɔ ne Dagombafoɔ. Wɔne Aborofo ntam guadi fii ase bere a wɔne Pɔtgɔkyifoɔ yɛ ntease apam wɔ mfe 1500 mu hɔ. Ɛno akyi no, Britainfo maa nea wɔfrɛ no Sika mpoano Ahenni no fii asɛ wɔ afe 1874 mu wɔ Ghana mmeae bi pɛ.
Gold Coast nyaa ne fahondie wɔ afe 1957 mu fii wɔn sodifoɔ a na wɔne United Kingdom no. ɛno ma Ghana bɛyɛɛ ɔman a edin nkan nyaa ne fahondie wɔ abibirim mantam ha.